Best HyperDAO mgbanwe
Best Buy price HyperDAO $ 0.021345 HDAO/USDT Hanbitco
Ahịa ahia kacha mma HyperDAO $ 0.022938 HDAO/USDT Bittrex
Mgbanwe crypto dị iche iche nwere oke azụmaahịa azụmaahịa. N'ihi nke a, crypto HyperDAO edobere ọnụego mgbanwe nke ego ego nke ọ bụla. A na-agbakọ ọnụego kacha mma HyperDAO site na ịtụle ọnụego mgbanwe na mgbanwe ego ego ego niile dị. Mgbe ahụ ị nwere ike were ọnụahịa kachasị mma. Ọrụ anyị Best HyperDAO mgbanwe na-enyocha usoro azụmahịa niile na mgbanwe mgbanwe ego ego n'ụwa niile gosipụtara gị otu kacha mma HyperDAO ịzụta na ire ọnụego ugbu a.
Best HyperDAO obere akpa
June 06, 2020 Kachasị mma ịzụta HyperDAO na June 06, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma HyperDAO na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe ego crypto nwere parampat dị mkpa: ịdị mfe nchekwa, ntụkwasị obi. Kachasị HyperDAO obere akpa nwere nchekwa kachasị mma na ntọala nche. Ejiri ezigbo mgbanwe ego ego HyperDAO n'oge ahọpụtara site na ịmụ nsonaazụ nke ọnụego azụmaahịa maka ịzụta na ire nke ego ego. Anyị na-enyocha usoro HyperDAO mgbanwe ego ego na ahịa niile wee họrọ azụmaahịa kachasị mma maka ịzụ na ire.
Ụlọ ahịa HyperDAO kacha mma
Oke ego HyperDAO ọnụego mgbanwe maka taa bụ 06/06/2020 - egosiri na tebụl azụmahịa niile maka taa. Kachasị mma HyperDAO ịzụta na ire ọnụ ahịa maka taa bụ 06/06/2020 n'isi nke ibe. N'ime tebụl ọnụego kachasị mma nke HyperDAO ị ga - ahụ ọnụahịa dị iche iche nke HyperDAO. You nwere ike ịhọrọ ndị kachasị mma, na mgbanwe ya ka mma ịchọta mgbanwe ego ego. Ihe ngbasa ozi nke HyperDAO Kasị mma ọnụego mgbanwe taa 06/06/2020 na-enyocha gị ọnụego ego ego kachasị mma site na ezigbo ezigbo ihe niile dị na ntanetị.
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa HyperDAO nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Hanbitco HDAO/BTC $ 0.021386 $ 16 368 -
Hanbitco HDAO/USDT $ 0.021345 $ 7 286 -
Bittrex HDAO/USDT $ 0.022938 $ 22 052 -
Bittrex HDAO/BTC $ 0.022936 $ 21 992 -
OKEx HDAO/USDT $ 0.022923 $ 2 517 077 -
OKEx HDAO/USDK $ 0.022439 $ 124 -
Ihe kachasị mma HyperDAO na-azụkarị ego mgbe anyị zụtara ego ego abụghị dollar, mana maka ego ma ọ bụ crypto dị iche na dollar. Ego o kacha zụta HyperDAO na dollar, ego ọ gbanwere na azụmahịa ahụ. Maka ụdị ego enwere ike HyperDAO gosipụta nke dị ọnụ ala karịa ego azụtara kacha mma. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa nke ego ego ị ga - ahụ ụzọ njikọ n’ahịa mgbanwe nke HyperDAO na - ere kacha mma.
Ọ dị mkpa ịmata ụdị mkpụrụ ego HyperDAO mgbe azụtara ego kachasị mma. Anyị na-egosipụta ozi a n'aka nri nke ọnụego ego ego kacha mma. Mgbanwe kachasị mma maka ịzụ ma ọ bụ ire HyperDAO edepụtara na tebụl dị na peeji a. A na-ahazi ngosipụta mgbanwe site na ọnụego mgbanwe kacha mma maka ire na ịzụ HyperDAO. Egosipụtara ọnụego a na dọla US. Nwere ike iji nzacha nke ego dị iche iche. Ọ dị n'elu tebụl nke mgbanwe crypto kacha mma.